Ataoko finitions en 3D amin’izay ny tranoko ka ! – Trano 3D
Ataoko 3D ny trano
Ny trano dia toerana tokony mahate honina, mahafinaritra sy ahafahana mitsahatra. Tsara atao 3D izy io mba tsy ho diso safidy ianao na amin’ny loko na amin’ny endrika hanaovana azy manomboka any amin’ny fototra hatrany amin’ny tafo.
Azo atao finitions 3D ve ny tranoko ?
Ny trano somary ntaolo tiana avaozina dia anisan’ny tena tsara atao 3D mialohan’ny hikitihana azy. Ary trano tsy mbola vita indrindraindrindra no tena ilaina atao finitions 3D madagascar. Ankoatra izay, raha lehibe ny tranonao dia tena mety raha atao 3D, maika moa fa raha kely, tsy aleo ve asiana endriny tena tsara rehefa samy kelikely ihany ? Raha efa nahavita ny plans 2D -na trano ianao fa ny asa no tsy mbola nanomboka dia tsara raha tonga dia atao ny 3D. Farany kosa : raha tena efa vita ny asa fa tsy nahaafapo ny endriny, dia voamaika tena ilainao ny mampanao 3D ny tranonao.
Fa misy tombony ho ahy ve ny fanaovako an’izay ?
Eny tompoko, misy mihitsy :
Mahita endrik’ilay trano mialoha
Afaka manova ny endriny tsy mandany vola amin’ny famotehana sy famerenana manangana
Afaka misafidy loko maromaro raha misalasala
Manamora ny fanazavana ny asa tokony atao amin’ny chef de chantier na ny tâcherons (maçons etc.)
Mahazo trano mahaafapo, tsara kalitao : miaraka amin’ny Trano 3D
Izany ve tsy lafo be ?
Marina fa hoe mety mampitombo vola mivoaka ny fampanaovana plans 3D, kanefa azo antoka kokoa ny hatsaran’ny tranonao izay hitoetra ela. Izany hoe mety ho mora kokoa noho ny famotehana noho ny tsy fahafaham-po tamin’ny zava-misy natsangana teo aloha aza.
3D ho an’ny tranonao ? Ankino amin’ny Trano 3D.
Miantsoa mivantana ny : +261 34 96 963 73
Tagué Architecte Madagascar, Architecte Malagasy, Architecture madagascar, btp madagascar, construction maison madagascar, designer 3D madagascar, designer madagascar, maquette 3D antananarivo, maquette 3D Madagascar, ny tranoko, plan 2D madagascar, plan 3D Antananarivo, plan 3D madagascar, plan d'architecture madagascar, plan d’architecture, plan madagascar, plan 3D, maquette 3D, plan gasy, trano gasy, ny tranoko, Trano 3D, trano 3D, trano gasy, trano malagasy
Article précédentImaginez, nous réalisons
Article suivantMaison 3D à Madagascar
1 réflexion au sujet de “Ataoko finitions en 3D amin’izay ny tranoko ka !”
oeil dans le monde dit :
Fa hotrany ahoana moa le 3D fa tsy Haiko .raha mba azonao hazavaina azafady